Ukulala ingane encane yokulala - amanothi nombhalo ukuze uphrinte
Ukulala kwezingane ezincane - amanothi nombhalo
Ukulala umbhalo omncane wengane
Amanothi nombhalo ulele ubuthongo obuncane
Ukulala, ingane, ulale!
Ubaba uvikela izimvu,
umama uyamshaya uBäumelain,
kuwela phansi ukuphupha.
Esibhakabhakeni yiya izimvu ':
Izinkanyezi ezincane zingamawundlu,
Ngakho ngikunika izimvu
kuhle ngebell golden,
lokhu kufanele kube ngumngane wakho odlala naye.
futhi ungakhathazeki, njengezimvu:
Uma kungenjalo, inja yomalusi izofika
futhi umlonda ingane yami embi.
Noten von Kinderlied Schlaf Kindlein ulale Vula njengefayela elifingqiwe